ARRIMAHA BULSHADA Archives | Page 30 of 123 | SOMALI NEWS U Adeegaha Bulshada
Home / ARRIMAHA BULSHADA (page 30)
Mareykanka oo baarayaal u diraya Itoobiya…
admin 25/06/2018	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Mareykanka ayaa baarayaal ka tirsan FBI-da u diraya dalka Itoobiya si ay baaritanno uga sameeyaan qaraxii dhawaan lala beegsaday isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Adis Ababa. Go’aanka Mareykanka uu baarayaal uga diraya Itoobiya ayaa imaanaya xilli ay wadahadallo dhex mareen sarkaal sare oo Amerikaan oo hostago waaxda ganacsiga laguna magacaabo Gilbert Kaplan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ...
Itoobiyaankii fara Oo Ku soo Qulqulaya Magalada Boosaaso
Waxaa deegaannada Puntland ku soo qulqulaya tahriibayaal badan oo ka imaanaya dhinaca Itoobiya, safarkooduna ku beegsanaya magaalo xeebeedka Boosaaso oo ay si dhuumaaleysi ah uga tahriibaan. Safarka muhaajiriinta ayaa ku soo beegmaya xili ay cimilada magaalada Boosaaso aad u ku lushahay, safarka badduna uu adag yahay maadaama lagu guda jiro bilihii bad xiranka. Tiradii ugu badneyd ee tahriibayaasha ayaa maanta ...
G/Bangiga Dhexe oo Amray Hay’adaha Amniga In La soo xiro Dadka Shacabka U Horseedayo Sicir bararka…
Guddoomiyaha Bankiga dhexe ee Dowladda Federalka Soomaaliya Bashiir Ciise Cali ayaa ka warbixiyay lacagaha cusub ee dalka loo soo daabacayo iyo sare u kaca ku yimid qiimaha sarifka Shilin Soomaaligaba. Bashiir Ciise Cali ayaa ku eedeeyay sicir kororka ku yimid Shilin Soomaaliga inay ka dambeeyaan shaqsiyaad dambiilayaal ah oo qalqal gelinayo nolosha bulshada Soomaaliyeed, isla markaana laga qaadi doono talaabo ...
Taageerayaasha Africa Oo Caawa sigaar ah u Xiisenaayo Daawashada Koobka Adduunka.
admin 24/06/2018	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Labada kooxood ayaa gacanta ku heysta natiijada ugu sareysa Group H, iyadoo kulankooda caawa uu noqon doono mid lagu ogaado xulka ugu sareeya Group-kaan. Si kastaba ha ahaatee, guul xul kasta uu gaaraa kulankaan waxay u xaqiijin doontaa marxalada uu ku gaaari karo wareega 16 tartankaan. Senegal ayaan wali laga badinin wareega group-ka Koobka Adduunka shan jeer oo ay kasoo ...
Galmudug / Puntland oo War kasoo saaray dhibaatada ka taagan Suuqyada Gaalkacyo
admin 24/06/2018	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA MAANTA
Gudoomiyeyaasha magaalada Gaalkacyo ee maamulada Puntland iyo Galmudug oo maanta Kormeer ku sameeyay Suuqyadda Magaalada Gaalkacyo ayaa Go’aamo adag kasoo saaray dhibaatada maalmihii lasoo dhaafay Shacabka Gaalkacyo ka heysatay diidmada lacagta Shilinga Soomaaliga. Gudoomiyaha Gaalkacyo ee Galmudug Xirsi Yuusuf Barrre ayaa sheegay in ay saakay Kormeereen Suuqyadda Magaalada Gaalkcyo,islamarkaana ay amar ku bixiyeen in Ganacsatadda ay qaataan lacagta Shilinga Soomaaliga. ...
Sacuudiga :oo Xayiraadihii saarnaa Haweenka wada Gawaarida oo la soo afjaray
Haweenka Sacuuga ayaa loo ogolaaday in ay kaxeeyaan Gawaarida,kadib markii la qaaday xayiraad tobanaan sano ah oo saarneyd Haweenkaasi. Isbadalkaan ayaa soo ifbaxay bishii Setember ee sanadkii tagay ,waxaana horaantii bishaan Sacuudiga uu bixiyay warqadda ogolaanshada wadidda Gawaarida,kaas oo ay qaateen Haweenka Tallaabadaan ayaa timid kadib kolkii koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda ay u ololeeyeen in Haweenka ay helaan xaqa ay ...
Gobolka Banaadir, Golaha Wasiirrada iyo Hay’adaha Amniga oo ka wada hadlay Amniga Caasimadda…
Duqa Muqdisho Ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa uga mahadceliyey Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Hay’addaha Amniga iyo bulshada ku nool Caasimadda guulaha amniga ee laga gaaray sugidda amniga Muqdisho intii lagu jiray bishii barakaysnayd ee Ramadan. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ka hadlayay kulan muhiim ah oo xarunta Dawladda Hoose ku dhex-maray Maamulka Gobolka Banaadir, ...
Lacagtii Shilinga Soomaaliga oo isticmaalkeeda laga diiday Gaalkacyo…
admin 23/06/2018	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA MAANTA
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in maanta guud ahaan Magaaladaasi laga diiday in wax lagula iibsado Shilinga Soomaaliga. Sidda ay xaqiijiyeen maamulka gobolka Mudug arintaan ayaa timid ka dib markii maalmihii lasoo dhaafay lacago Faaliso ah lasoo galiyay Magaalada. Ganacsatadda ayaa diiday Saaka in ay wax ka iibsadaan dadka wata Shilinga ...
Madaxweyne Gaas oo eedeeyay Madaxweyne Muuse Biixi Waa maxay sababta…
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo Khudbad ka jeedinaayay kalfadhigga Xildhibaanada maamulka Puntland ee maanta ka furmay Magaalada Garowe ayaa waxaa si kulul uga hadlay dagaallada gobolka Sool. Madaxweyne Gaas waxaa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay in ay dib u celiso degaanada ka maqan ee ku yaalla gobolka Sool. Gaas ayaa sidoo kale tilmaamay in ay ...
Goolkii guusha oo dhashay daqiiqadii 90-aad…
admin 23/06/2018	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Kooxda xulka kubbada caggta Switzerland ayaa qaaday tallaabo weyn, kadib markii ay usoo gudubtay kooxaha 16-ka ee Koobka Adduunka markii ay ciyaarta maraysay 90-ka daqiiqo , waxayna ka badisay kooxda Serbia. Ninka u ciyaara kooxda Stoke City Xherdan Shaqiri ayaa gool qurux badan kaligiis dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta, isaga oo xitaa dabo maray gool hayihii Serbia Vladimir Stojkovic. Switzerland ...
Sawiro,Taliyaha Ciidanka Xooga oo Tababar u furay cutubyo ka tirsan Ciidanka Ururka 60-Aad ee Ilaalada Madaxtoyada Qaranka…
Muqdisho(SONNA):–Taliyaha ciidanka xoogga dalka General C/wali Xuseen jaamac Gorod oo ay wehliyaan Saraakiil ka tirsan Ciidanka xoogga dalka ayaa tababar u furay cutubyo ka tirsan Ciidanka ururka 60Aad xooggga dalka. Tababarka loo furay Ciidanka Ururka 60-Aad ee ilaalada Madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa uu socon doonaa Mudo Saddax bilood. Ugu horeeynti waxaa munaasabada furitaanka tababarka ka hadlay G/dhaxe Odowaa yuusuf Raage ...
Daawo;Shir looga hadlayo arrimaha Deegaanka iyo Beeraha oo ka furmay Mareykanka…
Aqoonyahanno Soomaaliyeed oo isugu jira khabiiro dhinaca beeraha,wasiirro xilal ka soo qabtay Wasaaradda Beeraha Soomaaliya iyo masuuliyiin ku taqasusay cilmiga deegaanka ayaa shir uga furmay magalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka,kuwaasi oo ka kala yimid goboladda Dalka Mareykanka,Canada, Nairobi iyo meelo kale oo baddan. Shirkan ayaa ka furmay hollka shirarka ee Jaamacadda The Ohio State Unuversity ee magaalada Columbus,waxaana ujeedku ...
Ciidamada Liibiya oo badbaadiyay Tahriibayaal Afrikaan….
admin 22/06/2018	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA MAANTA
Ciidamada Badda ee Dalka Liibiya ayaa shalay oo Khamiis ahayd badbaadiyay Laba Doomood oo ay saarnaayeen 301 Qof oo tahriibayaal Afrikaan ah, xilli ay ku guda jireen howlo gaafmeer ah. Doomahan oo ku qallibmay Xeebta Magaalada, Garrabulli oo 55-KM Koonfur kaga beegan Caasimadda Tripoli ayaa waxaa dadka saarnaa ka mid ahaa 46 Carruur ah iyo Saddex Haween ah, sida uu ...
Erdogan oo ay u badantahay inuu ku guulaysto doorashada Axadda dhacaysa..
admin 22/06/2018	ARRIMAHA BULSHADA, WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Ninka ugu cadcad dadka madaxweynaha Turkiga kula loolamaya doorashada madaxtinimada ee Axadda dhici doonta ayaa fagaare dad badani iskugu soo baxeen kala hadlay taageerayaashiisa magaalada xeebta ku taal ee Izmir. Muharrem Ince, oo ah hogaamiyaha xisbiga cilmaaniga ah ee Jamhuuriga Shacabka ayaa ku tilmaamay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan nin daalay, gooni socod ah oo keligii qummane ah, waxaanu mar labaad ...
Cayaaryahan caan ah oo sharaxay shaqadiisi hore..,
Ciyaaryahan Raheem Sterling Ciyaaryahanka Britain u dhashay ee baalka ka ciyaara Raheem Sterling ayaa sheegay inaa aanu wewel ka qabin dhaleecaynta warhaahinta ee la xiriirta qaab nololeedkiisa sare iyo siliska hodantinimada muujiya ee uu xirto. Sterling, oo 23 jir ah ayaa marar badan dareemay in aad loo danaynayo inta uu kujiro, shaqo maalmeedkiisa, tii ugu dambaysay ayaa ahayd moodo cusub ...